ပိုမိုကောင်းမွန်သောအော်ဂဲနစ်အဆင့်အတွက် Semalt မှ SEO လမ်းညွှန်ချက်များ
ဂူဂဲလ်လိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေဟာဒီနေ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့မြင်သာမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာ - သို့မဟုတ် search engine optimization - ဤနေရာတွင်မှော်စကားလုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူဂဲလ်၏ရလဒ်စာမျက်နှာရှိသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုများ၏ထိပ်ဆုံးတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ B2B ကုမ္ပဏီများအတွက်ပစ်မှတ်အုပ်စုမှသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားသောကုမ္ပဏီများ၏မြင်သာမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်သင်ဤ SEO သည်တန်ဖိုးရှိကြောင်းနှင့် B2B တွင်၎င်း၏အရေးပါမှုကိုသင့်အားအသိပေးရန်ဖြစ်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်း SEO ဆိုသည်မှာ B2B အတွက်အကျိုးရှိပါသလား။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၏ (SEO) အတိုင်းအတာသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိတစ် ဦး ချင်းစာမျက်နှာများကိုပထမရှာဖွေမှုရလဒ် ၁၀ ခုအနက်သင့်လျော်သောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများသို့ရောက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်သောအခါ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်မရေမတွက်နိုင်သောအချက်များနှင့်အသုံးပြုသူအချက်ပြမှုကိုအသုံးပြုသည်။
အခြားအရာများအပြင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တည်ဆောက်ပုံ၊ နည်းပညာနှင့်အမြန်နှုန်းကိုအကဲဖြတ်သည်။ သို့သော် SEO quintessence သည်အကြောင်းအရာအားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင့် site ပေါ်တွင်သင်ကမ်းလှမ်းသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဂူးဂဲလ်၊ Bing နှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးသည်။ အချို့သောသော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးစုံစမ်းမှုသည်။
ရှာဖွေသူများ၏မေးခွန်းများကိုအပြည့်အ ၀ ဖြေ ဆို၍ ကျေနပ်ရောင့်ရဲပါကအကြောင်းအရာသည်အမြဲကောင်းပါသည်။ အသုံးပြုသူ၏နေထိုင်မှုကြာချိန်၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းလည်ပတ်ခြင်းရှိမရှိစသည့်အချက်ပြမှုများဖြစ်သောဂူဂဲလ်မှအခြားရှာဖွေမှုရလဒ်တစ်ခုကိုခေါ်ဆိုသည်။
B2B SEO သည် B2C SEO နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားနေဆဲဖြစ်သည်။ Google သည်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအကဲဖြတ်သတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်တောင်မှ B2B နှင့် B2C SEO သည်အောက်ပါအချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်။
စျေးဝယ်ခြင်းကို B2C ထက် B2C တွင်ပိုမိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, SEO သို့မဟုတ် Google B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်မဟာဗျူဟာတိုင်းတွင်အခိုင်အမာအမြစ်တွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အဆင့်အတန်းမြင့်မားပါကမှန်ကန်သောပစ်မှတ်အုပ်စုမှလမ်းကြောင်းများစွာသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ ဤသည်အလှည့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့မှာအများကြီး ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသိများစေပြီးသင်၏ကုမ္ပဏီအားသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ယူမှတ်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာဘာလဲ၊ search engine optimization ဆိုတာဘာလဲ
SEO ဆိုသည်မှာအင်္ဂလိပ်စာ Search Engine Optimization အတွက်အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် SEO နဲ့ search engine optimization အတူတူပါပဲ - တစ်ခါတစ်ရံ SEO optimization ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။
ဤနည်းဗျူဟာ - များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်လေ့ရှိသော - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ကုမ္ပဏီများ (သို့) လူအများအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ရန် (မရသော) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မှန်ကန်သောရှာဖွေရေးမေးခွန်းများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်ပစ်မှတ်အုပ်စုတွင်မြင်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ် (အတိုအထွာ) သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာ (SERP) တွင်အလားအလာကောင်းပြီးကြည့်ရှုသူများမှနှိပ်လိုက်လျှင်၊ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသွားအလာကိုဤကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ Traffic သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်သောအသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုဖော်ပြသည်။
သို့သော်အသွားအလာသည်ကောင်းမွန်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှု၏တစ်ခုတည်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုများစွာအတွက် ဦး စားပေးခေါင်းစဉ်တွင်ပေါ်လာပါက၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောအမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိသည် - သင့်ပစ်မှတ်အုပ်စုမှသုံးစွဲသူများကသင့်အားသိမြင်လိမ့်မည် ခေါင်းစဉ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ
SEO စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - ဘယ်အချိန်မှာ Search Engine အဆင့်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
ဤမေးခွန်းအတွက်ရှင်းလင်းသောအဖြေမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင်၏ပစ်မှတ်အုပ်စုအပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်အချို့အချက်အလက်များသည်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရာထူးများကိုအကဲဖြတ်ရန်ကူညီသည်။
ကလစ်အများစုသည်ပထမဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာမှရလဒ်များမှလာသည်။ Google ၏ desktop version ဖြင့်ရလဒ် ၁၀ ခုကိုသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအတွက်ရရှိသည်။ မိုဘိုင်း version တွင် ၇ ခုသာရှိသည်။ Sistrix က ၂၀၁၅ မှလေ့လာမှုအရကလစ်အားလုံး၏ ၉၉.၁% သည်ပထမဆုံး SERP မှဖြစ်သည်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်နှင့်အတူ ၈၊ ၉ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းတွင်၊ SEO tool provider သည်ပထမရလဒ် ၁၀ ခုကြားမှပင်ကလစ်များကိုကွဲပြားစွာဖြန့်ဝေထားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ပထမရှာဖွေမှုရလဒ်သည်ကလစ်အားလုံး၏ ၆၀%၊ တတိယအတိုအထွာသည် ၇.၉၂% နှင့်အeight္ဌမရလဒ် - ၁.၃၃% သာရရှိသည်။
B2B ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဤတိုးတက်မှုသည် ပို၍ ပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောဗဟုသုတဇယားနှင့်ထူးခြားသောသရုပ်ပြ (ဥပမာဤ SEO လေ့လာမှုတွင်ဂူးဂဲလ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ရလဒ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်) သို့သော်အခြေခံအားဖြင့် SERP ၏ထိပ်တွင်ရှိသောဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများသည်အရေအတွက်တိုးပွားစေသည့်နောက်ထပ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပေးသည်။ အနှိပ်စက်ကလစ်၏။
ထို့အပြင် B2B SEO တွင်ရှာဖွေမှုအလွန်နည်းသောရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုများအတွက်စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်ရာထူးများကိုသင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ တစ်လလျှင်ရှာဖွေမှုမေးမြန်းမှု ၁၀၀ ခန့်နှင့်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အeight္ဌမနေရာ၌ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်တစ်လလျှင်လူ ဦး ရေ ၁.၃၃ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ တိကျသောဝေါဟာရများအရဆိုလိုသည်မှာသိသာထင်ရှားသည့်အသွားအလာပမာဏကိုအမှန်တကယ်ရရှိရန်သင်သည်သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုရာထူး ၁ မှ ၃ တွင်အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းinရိယာတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ရမည်။
SEO, SEA, SEM? စည်းကမ်းချက်များ၏အဓိပ္ပါယ်
SEO နှင့် search engine optimization အပြင် SEA ဟူသောဝေါဟာရများကိုမကြာခဏကြားနာဖတ်ရသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ SEM စသည်
အတိုချုပ်ရှင်းပြပြီး SEM (Search Engine Marketing သို့မဟုတ် English Search Engine Marketing) သည်နည်းဗျူဟာနှစ်ခုဖြစ်သော SEO (Search Engine Optimization သို့မဟုတ် English Search Engine Optimization) နှင့် SEA (Search Engine Advertising သို့မဟုတ် English Search Engine Advertising) တို့ပါ ၀ င်သည့်ထီးထီးသက်တမ်းဖြစ်သည်။
SEO နှင့် SEA အကြားကြီးမားသောကွာခြားချက်မှာ SEO တွင်သင်သည်အကြောင်းအရာများ၊ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံကောင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူအချက်ပြမှုများကို အသုံးပြု၍ သင်အော်ဂဲနစ် (မပေးရသေးသော) ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအတွက်ဂူးဂဲလ်တွင်အဆင့်အတန်းမြင့်မားအောင်အသုံးပြုသည်။ SEA တွင်ရှိနေစဉ်ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာ (SERP) ၏ထိပ်ဆုံးတွင်သော့ချက်စာလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောနေရာကိုသင်ပေးချေသည်။
အဆင့် - သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်နေရာချခြင်း။
Snippet - URL၊ ခေါင်းစဉ် tag နှင့် meta ဖော်ပြချက်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရှာဖွေမှုရလဒ်တစ်ခုစီ။
Featured Snippet - ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြပြီးရှာဖွေမှုရှာဖွေမှုအတွက်အတိုချုပ်အဖြေပေးသောအထူးမီးမောင်းထိုးပြသည့်ရှာဖွေမှုရလဒ်။
Crawler - သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးပြီးအကဲဖြတ်သော algorithm တစ်ခု။
Indexing/De-indexing - ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ URL ကို Google bot (crawler) ကရှာပြီး Google မှာစာရင်းလုပ်သင့်လားဆိုတာကိုဒီမှာသင်သတ်မှတ်သည်။
CTR - ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်ဂူးဂဲလ်ပေါ်ရှိသင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏နှိပ်ခြင်းနှင့်စွဲမှတ်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။
SERP သို့ Short Click/Return: ရှာဖွေခြင်းရလဒ်ကို Google ပေါ်တွင်နှိပ်သောအခါ၊ အသုံးပြုသူသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာကိုပြန်နှိပ်ပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း SEO ၏အရေးပါမှုသည် B2B ကုမ္ပဏီများအတွက်အလွန်များပြားလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအထူးသဖြင့်ဂူးဂဲလ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေမှုများသည်မကြာခဏစတင်သည်။
ဂလိုဘယ်နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ Google သည်အရေးအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက် Microsoft Bing နှင့်တတိယနေရာတွင် Yahoo!
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဝေစု (ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ တွင်)
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ကြဉ်းပေးသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဆိုလိုသည်။ Google SEO သည်လုံးဝနီးပါးသက်ဆိုင်သည်။ စကားမစပ်, မိုဘိုင်းရှာဖွေရေးကို Google ကပို။ ပင်လွှမ်းမိုးသည်။
2019 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အင်တာနက်ပေါ်မှာအဆက်အသွယ်၏အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၉၂.၆% က၎င်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်းအနည်းဆုံးရံဖန်ရံခါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပထမနေရာတွင်ထားရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်များသည်ဂူဂဲလ်တွင်လည်းအထူးသဖြင့်သူတို့၏ပြproblemsနာများအတွက်အဖြေရှာရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောရှာဖွေမှုများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရခြင်းမရှိပါကအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်သင့်အားပံ့ပိုးသူအဖြစ်မသတ်မှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အားလုံးဝသတိမထားမိခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်များအတွက် SEO အကြံပေးချက်များ
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုအသုံးပြုလာသည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာအထူးကုတွေပိုများလာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာမှာ SEO အခြေခံကျတဲ့အမှားအယွင်းအချို့ရှိနေသေးသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ SEO အတွက်တိကျစွာပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် SEO ရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်းမမေ့သင့်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားတိုင်းသည် SEO ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စစ်ဆေးရကျိုးနပ်သောအရာများစာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်တဲ့ entry ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေမည့်အရာများထဲတွင်သင့်အတွက်တစ်ခုခုရှိမရှိကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် SEO အကြံပေးချက်များ - ဤအရာသည်သင်၏အလုပ်သို့မည်သည့်အရာများဆောင်ကျဉ်းပေးမည်နည်း။
အများအားဖြင့် SEO ရေးသားချက်များသည်နေရာချခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် SEO နှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါလူအများအံ့အားသင့်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့ SEO အကူအညီပါ ပိုကောင်းတဲ့မြင်သာရရန်သင်၏အကြောင်းအရာ ရှာဖွေရေးအတွက်။ ထို့ကြောင့်၊ ရှာဖွေမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ပေးမည့် SEO အထူးကုများ၏အကြံဥာဏ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသူများသည်၎င်းကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက် SEO နှင့် content marketing ကိုတစ်ပြိုင်တည်းအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်အတွက်မည်သည့် SEO အကြံဥာဏ်များသည်အရေးကြီးသနည်း။
SEO အကြံပေးချက်များသည်များသောအားဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ပါဝင်မှုကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးအများဆုံးအမှားများကိုသက်ရောက်စေသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးအများဆုံးအမှားတွေကိုအောက်မှာရှာပါ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားလည်ရန်ရိုးရှင်းသောဥပမာတစ်ခုယူပါလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုတွင်အမျိုးသားဖက်ရှင်အကြောင်းစာသားများကိုယူကြပါစို့၊ ပိုကောင်းသည့်သော့ချက်စာလုံးများသည်“ ဖက်ရှင်” သို့မဟုတ်“ အဝတ်အစားများ” အစား“ အမျိုးသားဖက်ရှင်”၊ “ အမျိုးသားအဝတ်အစား” များဖြစ်လိမ့်မည် (နောက်ဆုံးတွင်အမျိုးသမီးများသည်အကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေနေသည်။ ) ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကောင်းစွာနေရာချရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုထိန်းသိမ်းရန်သော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ သော့ချက်စာရေးဆွဲခြင်းကိရိယာများသည်ကူညီနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏အခြေခံနှင့်အခမဲ့ကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုမှာဂူဂဲလ်မှသော့ချက် Planner ဖြစ်သည်။ အခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခမဲ့သို့မဟုတ်ငွေပေးချေသည့်ပရိုဂရမ်များကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Google Trends မှရရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလည်းသိရန်ကောင်းသည်။
ယခင်ကသော့ချက်စာလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သော်လည်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်စာသားများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်၊ စာမျက်နှာခွဲများနှင့်လင့်ခ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ၏ resolution နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပြင်ဆင်မှု၊ ထုတ်ဝေမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဤကိစ္စတွင် SEO အကြံပေးချက်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကြောင်းအရာကိုပြင်ဆင်သူများသည်၎င်းအကြောင်းအရာကိုလက်ခံရရှိသူများကမည်သို့မြင်သည်ကိုမဆန်းစစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မြင်သာထင်သာရရှိခြင်းရှိမရှိ။ အကယ်၍ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပေးထားသောသော့ချက်စာလုံးအတွက်ရေးထားလျှင်၎င်းသည်အနေအထားကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ လိုအပ်ပါက၎င်းရာထူးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့ဂ်တွင်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်း၏အရေးပါမှုအကြောင်းရေးသားပြီးဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နေရာချထားမှု၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဂူဂဲလ်၏အမှတ်အသားဖြစ်သောစာမျက်နှာများကိုလင့်ခ်လုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းကိုအကြံပြုသည်။ သင်၏စာသားကိုအခြားပေါ်တယ်တွင်ထုတ်ဝေပါကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခါ၎င်းသည်ရေးသားသူကိုတက်ကြွသော link တစ်ခုဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်၊ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နေရာချထားမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောအဖြေတစ်ခုသာမကအခြားသူများကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် အင်တာနက်ပေါ်ရှိစာရေးသူ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်။
အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများလုပ်မိသည့်နောက်အမှားတစ်ခုမှာဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာကိုပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုထပ်မံမလွှဲမပြောင်းဘဲအခြားစာမျက်နှာခွဲသို့ရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်မြှင့်တင်ပြီးပါက၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည်လိပ်စာဟောင်းတွင်အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်၏စက်ရုပ်များသည်ပါဝါကိုစာမျက်နှာခွဲအသစ်သို့လွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊
သင်မြင်သည့်အတိုင်း SEO သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အမြဲဆက်စပ်နေပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုဖြည့်စွက်သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ပြင်ဆင်မှုနှင့်လက်ခံသူအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေခြင်းဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရာထူးရှိသည်။